I-Atlas ye-Infegy: Iimpendulo ezikrelekrele ezivela kwiMidiya yokuSebenza | Martech Zone
I-Atlas ye-Infegy: Iimpendulo ezikrelekrele ezivela kwimithombo yeendaba
NgoLwesihlanu, ngoJanuwari 30, 2015 NgoLwesithathu, ngoFebruwari 4, 2015 Douglas Karr
Ukuphosa kuninzi lophando endilubonayo kwi-Intanethi yimeko yeenkcukacha-manani ezibonelelweyo. Ndifumanisa ukuba amanani-manani alahlekisa (rhoqo ngenjongo) kwaye asekwe kwiifestile zeemeko ezifanelekileyo okanye iziganeko ezingaqhelekanga. Nangona kunjalo, kwabelwane ngazo nangayiphi na indlela. Kwimeko apho, ndiqinisekile ukuba phantse naluphi na uhlobo oluphakathi luya kukuxelela ukuba banembuyekezo elungileyo kutyalo-mali.
Akunakwenzeka ukuba wonke umntu abe ngowona ogqwesileyo… kwaye okona kubaluleke kakhulu, kokona kulungileyo kukuzithoba. Umxholo ojikelezileyo unokubandakanya ubungakanani beenkampani, indleko zokufumana ilayisensi, iimpawu zomthengi oziqhubela phezulu eyona. Kutshanje, ndibone uthelekiso lweenkqubo ze-CMS ezibhalwe ukuba zezona zidumileyo- kodwa yasilela kuwo nawuphi na umxholo kubungakanani kunye nenjongo yomxholo owawupapashwa, izixhobo zangaphakathi zokuphucula i-CMS, kunye nokuguquguquka kwe-CMS kumajelo. Eyona nto ilungele inkampani enye ayisiyiyo eyenye efanelekileyo - yiyo loo nto DK New Media uye waba ngumthengisi wokufumana iminyaka. Sisebenzisa umxholo, sithelekisa inkampani nesisombululo esifanelekileyo.
Nantsi ividiyo entle ethetha nayo I-Atlas yokunyanga, iqonga lokujonga eluntwini elisetyenziselwa ukunceda iimveliso zenze izigqibo ezingcono ngokusekwe kwiincoko zexesha lokwenyani kumajelo asekuhlaleni. Kumzekelo wethu ongentla, ubukrelekrele kwezentlalo bunokubonelela ngokophuka kwe-firmagraphics enxulunyaniswa nenkampani ukuhambelana nezisombululo ekufuneka bezithintele okanye banomdla kuzo.
I-Infegy Atlas liqonga lobukrelekrele eluntwini eliphuhlisiwe ukuphendula imibuzo ngeendlela ezine eziphambili ekugxilwe kuzo:
kweFidi -Ukudibanisa ngaphezulu kwe-100 yamanqaku edatha, i-Infegy Atlas ivelisa ngokuzenzekelayo amabali ukukuxelela okwenzekayo ngesihloko sakho, ibalaselisa imicimbi ephambili ekuhambeni kwexesha, kwaye ichaze idatha, ikuse ngaphaya kweetshathi kwaye ngqo kwiimpendulo.
uthelekiso -Qhuba ukuya kwizifundo ezi-XNUMX ezizodwa ngaxeshanye, kwaye i-Infegy Atlas iya kukunika ukuqonda okutyebileyo malunga nendlela abathelekisa ngayo, yintoni eyenza ukuba bahluke, kunye nezinto abanazo ngokufanayo. Iidatethi zihlaziywa kunye, zikunika ulwazi olutsha olungenakufunyanwa ngesifundo esinye sodwa.
Iilwimi -Infegy Atlas inikwe amandla yi Iilwimi ezingezizo, Uyakwazi ukufunda nokutolika isicatshulwa ngakumbi njengomntu kunesoftware. Le teknoloji, iphuhliswe kwi-Infegy ngaphezulu kweminyaka esixhenxe, iyakwazi ukuhlalutya ulwimi oluntsonkothileyo, ikunike uhlalutyo oluthembekileyo nolutyebileyo lwezimvo zentlalo
Iinkcukacha Olona qeqesho lwedatha lwentlalo lude ekuhlaleni, olwenziwe ngokubanzi kumajelo aliqela, aqheleke ukubonisa uluntu ngokubanzi, kwaye acoceke ngokungqongqo ukuze aqinisekise iziphumo ezichanekileyo, ezinokuthenjwa
Nazi iindlela ezili-10 zokuba olu lwazi lunokusetyenziswa njengearhente:
tags: ii-atlisi ze-infegyIilwimi ezingezizoukufumanisa kwezentlaloubukrelekrele kwezentlalouthelekiso kwimidiya yoluntuubuntlola beendaba zosasazoezolwimi kwimidiya yoluntu
Iindlela ezi-7 zokuKhulisa uMxholo wakho weNdalo
Ukubeka iliso kuLwazi oluPhambili kubathengisi be-imeyile